Global Voices teny Malagasy · 8 Janoary 2019
08 Janoary 2019
Oktobra 2021 31 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 08 Janoary 2019
Jordania hanara-maso ireo famoahana an-tserasera sy tranonkala
Jordania08 Janoary 2019
(Lahatsoratra teny anglisy septambra 2007) Hanara-maso ireo famoahana an-tserasera sy tranonkala i Jordania, hoy ny nambaran'i Nabil Al-Momani, mpanampy ny mpitantana ankapobeny ny departemantan'ny fanontana sy famoahana ao Jordania androany. Manomboka amin'izao fotoana izao dia ho eo ambanin'ny Lalànan'ny Gazety sy ny Famoahana ny tranonkala sy ny gazety elektronika. Nilaza i Al-Momani...
Nesorina ny fandraràn'i Tonizia ny Facebook
Tonizia08 Janoary 2019
Nesorina tao Tonizia nanomboka omaly 3 Septambra 2008 ny fandraràna ny tranonkala tambajotra ara-tsosialy malaza Facebook taorian'ny fihetsiketsehana goavana nataon'ny mpiserasera toniziana.
Vita amin'ny teny Paortiogey ny mibilaogy miafina maripanondroana WordPress & Tor
Mediam-bahoaka08 Janoary 2019
Vita amin'ny teny Paortiogey ankehitriny ny torolalana The Anonymous Blogging with Wordpress and Tor (Fibilaogina tsy mitonona anarana amin'ny Wordpress sy Tor) noho i Guilherme Barcellos, ao amin'ny GlobalVoices em Português.
Arabia Saodita08 Janoary 2019
Nitatitra ny Pinkpaper.com fa nogadraina nandritra ny herintaona, nandoa onitra 1 300 dolara amerikana, ary novelesina karavasy in-1.000 noho ny famoahana lahatsary pelaka i i Ahmad al-Faqih.
Nakaton'i Koety ny Youtube noho ny lahatsary anti-Miozolomana
Koety08 Janoary 2019
Nakatona tany Tonizia, Torkia ary Syria ny Youtube. Jereo ny sarintany Access Denied Map raha te-hahafantatra bebe kokoa momba ny sivana amin'ny aterineto 2.0 sy ny ezaka fanoherana ny sivana.
Rosia08 Janoary 2019
Mety higadra telo taona an-tranomaizina ilay bilaogera Rosiana 23 taona, Dmitry Shirinkin, izay nanoratra tantara foronina tao amin'ny bilaoginy aingam-panahy tamin'ny fakàna sary tao Virginia Tech.
Fihaonambe Advox: Awab Alvi miresaka momba ny Ady ho an'ny Aterineto maimaim-poana ao Pakistan
Resaka tamin'ny Fihaonambe Global voices 2008 "Mankany amin'ny Tambajotra Manerantany manohitra ny Sivana" tamin'ny 27 Jiona 2008.
Nakaton'i Kazakhstan ireo tranonkalan'ny mpanohitra
Kazakhstan08 Janoary 2019
Tamin'ny 18 Oktobra 2007, nakaton'i Kazakhstan ny fidirana amin'ny tranonkala mahaleotena maromaro mba hanakanana ny fampahalalam-baovaon'ny mpanohitra lehibe, anisan'izany ny kub.kz, geo.kz, zonakz.net sy ny inkar.info.
Tonizia: Nakatona ve ny Youtube?
Raha marina izany, dia ny Youtube no tranonkala fizarana lahatsary faharoa nakatona tao Tonizia. Hatramin'ny 3 Septambra 2007, mbola nosakanan'i Tonizia ny fidirana ao amin'ny Dailymotion.
Fiji: Mandrahona ny fiarovam-pirenena ny bilaogy
Fiji08 Janoary 2019
(Marihina fa tamin'ny volana May 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Ny 14 May 2007, nitatitra ny Intelligentsiya fa manana ny lisitr'ireo olona miisa 20 hosamborina noho ny fifandraisany amin'ny bilaogy tsy tia miaramila ny Komandin'ny Tafika An-tanety. Notaterina ihany koa fa nanery ny FINTEL, izay hany mpanome tolotra aterineto ao...